एक रातमा एउटा पुरुषले कति पटकसम्म स;हवास गर्न सक्छ ? एकै रातमा लगातार गरेको गरै गर्दा के हुन्छ ? – Gazabkonews
एक रातमा एउटा पुरुषले कति पटकसम्म स;हवास गर्न सक्छ ? एकै रातमा लगातार गरेको गरै गर्दा के हुन्छ ?
एजेन्सी । पछिल्लो समय विश्वमा यौ,न सम्बन्धी कयौं शीर्षकमा रिसर्च हुन थालेका छन् । से: क्सका मामिलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले सर्वसाधरणहरुसँग धारण बुझेर बिभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । विज्ञहरुको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म से, क्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न । तर, यौ -न स-म्पर्कलाई खानपानले पनि असर गर्ने हुँदा ठ्याक्कै यति नै पटक हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
औषतमा भन्ने हो भने एक रातमा ४ पटकसम्म राम्रो यौ-न स-म्पर्क हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् ।एक स्वस्थ तथा वयस्क पुरुषले यौ-नको च-रम सु-खानुभोगको आधार मा उसको यौ- नको मात्रा तथा गन्ति गर्न सकिन्छ ।
पुरुषहरु मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यो अवस्था दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ ।अन्य अवस्थामा यो मात्रा कति हुन्छ त अ-ण्डकोष अति नै संवेदनशील हुन्छ, औंलाका टुप्पाहरुले अण्ड-कोषमा बिस्तारै प्रेमस्पर्श गर्नाले, जिब्रोले अण्डकोषलाई स्पर्श गर्नाले र सामान्य सोही अंगलाई हातले हलचल गराउनाले तपाईंले तपाईंको पुरुष पार्टनरलाई च रम उ त्कर्षमा लैजान सक्छन् ।